पर्सा, २७ जेठ । वीरगन्जको सीमापारि भारतीय आईसीपीमा नेपाली ट्यांकरलाई डेडिकेटेड लाइन (छुट्टै सवारी लाइन) दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । सातायता भारतको रक्सौलमा इन्धन बोक्ने नेपाली ट्यांकरका चालकमाथि भइरहेको कुटपिट ...
काठमाडौं, २६ जेठ । उद्योगहरूले उत्पादन गरेर बजारमा बेच्न पठाएको प्रशोधित पानी, दूध र दहीमा दिसामा पाइने हानिकारक जीवाणु कोलिफर्म भेटिएको छ । विभिन्न उद्योगका घिउ र तेल पनि गुणस्तरहीन भेटिएका छन् । खाद्य ...
काठमाडौं, २५ जेठ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदारको दाबीकै आधारमा मोटो रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ। ठेकेदारले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ। आयोजनाले कुनै कानुनी उपचार नखोजी ...
कृषियोग्य जमिनको २१ प्रतिशत भूभाग बाँझै
काठमाडौं, २५ जेठ । कृषियोग्य मुलुक भए पनि कृषियोग्य जमिनको २१ प्रतिशत भूभाग भने बाँझै छ । कृषि श्रमिकको अभाव, युवा पलायन र कृषिमा आकर्षण घट्दो क्रममा रहेकाले जमिन बाँझिने समस्या बढेको ...
ट्रेकिङ व्यवसायमा ‘कालो धन्दा’ : विदेशीलाई बिरामी बनाएर रकम असुली !
विदेशी पर्यटकलाई जानाजान बिरामी बनाएर केहि ट्रेकिङ व्यवसायीहरुले कमाउ धन्दा गरिरहेको उजुरीबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेपछि सो क्षेत्रमा हंगामा भएको रातोपाटीमा खबर छ ।नेपालको विभिन्न पर्यटकीय ...
सरकारले ३ महिनामै बाँड्यो १ करोड आर्थिक सहयोग
काठमाडौं, २४ जेठ । सरकारले उपचार खर्च र आर्थिक सहायताका नाममा ३ महिनामा १ करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको छ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएयता मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् १ करोडभन्दा बढी आर्थिक ...
काठमाडौँ, २२ जेठ । दुर्गम साईपाल गाउँपालिकामा खाद्य संस्थाले चामललगायत खाद्यन्न विक्री वितरणमा अनियमितता गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । सरकारबाट ढुवानी अनुदान लिएर भित्र्याईएको खाद्यान्न संस्थाले काँडा वितरण केन्द्रले स्थानीय व्यापारीलाई ...
काम नगर्नेलाई नै बढी ठेक्का !
काठमाडौँ, २२ जेठ । गत वैशाखमै सक्नुपर्ने ९ वटा योजनाको निर्माण कार्य अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन । कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका योजनाको निर्माण सम्पन्न नभएको हो । अझ रोचक त ...
काठमाडौँ, २१ जेठ । आयल निगमले १५ दिनअघि मूल्य समायोजन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७८.२८ अमेरिकी डलर थियो । नेपाली बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय १० र डिजेल ९२ ...
बजेट समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु: अर्थमन्त्री खतिवडा
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्दै समृद्धिको प्रस्थान बिन्दुकारुपमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट तयार पारिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र ...
तेस्रो मुलुक मालवस्तु आयात–निर्यातका लागि सर्वाधिक उपयोग हुँदै आएको वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा कन्टेनर थन्किने समस्या बढदो छ । तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता हुँदै वीरगन्ज आई मालवाहक कन्टेनर तथा ...
‘सरकार ! सिन्डिकेट खारेजी महसुस भएन’
काठमाडौँ, १८ जेठ । यातायातमा सिन्डिकेट खारेज भयो माधव थापाले पत्रपत्रिकामा यस्तैयस्तै शीर्षकमा धेरै समाचार पढे । समाचार पढेपछि थापालाई लागेको थियो, सिन्डिकेट खारेज भएछ । अव उपत्यकामा आवतजावत गर्न सहज हुने भयो ...
व्यवसायीको मनोमानी, बजेट भाषणलगत्तै मूल्यवृद्धि
काठमाडौं, १८ जेठ । बजेट भाषणलगत्तै कोटेश्वर निवासी चन्दा पौडेल फ्रिज खरिद गर्न न्युरोड पुगिन् । व्यवसायीले भन्सार बढेको जनाउँदै बजारभाउ भन्दा थप ५ प्रतिशत बढी रकम असुल्न खोजे । ‘बजेट ...
कुन तहको प्रमाणपत्रलाई कति ऋण ? आयोग कहिले ?
काठमाडौँ, १७ जेठ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । बेरोजगार युवाका लागि पक्कै उत्साहपूर्ण खबर हो यो । तर, ...
पेन्सन फन्डः राज्य आर्थिक बोझबाट मुक्त
काठमाडौं, १७ जेठ । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दै गएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बोझबाट मुक्ति पाउन सरकारले बजेट भाषणमार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको योगदानमा आधारित प्रणाली ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको ...
जिल्ला अस्पताल रोल्पामा १८ विर्षीया एक किशोरी भेटिइन्, जो आमा बनिसकेकी छिन्। आफ्ना दुई वर्षीय छोरालाई रुघाखोकी र ज्वरोले सताएपछि उनी अस्पताल आएकी हुन्। झट्ट हेर्दा आमा भनेर पत्याउन गाह्रो पर्ने ...